Sucuudiga – Marka Adeegtadu Denbi ka dhaco! | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in Wararka May 17, 2019	0 365 Views
Riyad (HN) — Jaariyad u dhalatay dalka Filibiin oo u shaqeysa qoys ladan oo ku nool caasimadda Sucuudiga, waxaa xargo lagu xirxiray geed kaddib markii sida la sheegay ay walxo qaali ah uga soo dhaqaaqday kuleylka qorraxda.
26 jirta lagu magacaabo Lovely Acosta Baruelo waxaa la sheegay inay ka careysiisay milkiilaheeda kaddib markii walxo qaali ku ah noloshiisa ay kaga soo tagtay qorraxda ardaaga hore ee guriga. Si haddaba loo dhadhansiiyo xanuunka alaabta qaaliga ah oo ay kusoo ilowday qorraxda, waxaa la mariyay ciqaab ah inay iyadana lagu xirxiro bannaanka si ay u dareento kuleylka cadceedda. Waxayna muddo dheer ku xirneyd bannaanka hore ee guriga.
Sawiro muujinaya iyada oo xargo lagu xerxeray – halkaas oo shaqaalaha kale ee guriga si gargaar la’aan ah ay shaqadooda iskaga wataan ayaa waxaa duubtay gabar kale oo jaariyad ah. Waxaana ay ku baaheen baraha bulshada. Waxayna inantani codsaneysay in gabadhaas la tacdiibayo degdeg looga gaaro.
Markii sawiradeedu baaheen, waaxda arrimaha dibadda Filibiin ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegeyso inay si dhow ula socto xaaladda haweeneydan oo ay isku dayayaan inay usoo safriyaan dalkeeda. Gabadhan ayaa ugu danbeyntii ka degtay caasimadda dalkeeda ee Manila. Waxayna u mahad-celisay cid walba oo gacan ka geysatay gurmadkii lagu soo furtay.
“Waad mahadsan tihiin, waxaana sidoo kale caawimo idin weydiisanayaa muwaadiniinta kale ee Filibiin oo ku dhiban Sucuudiga,” ayay tiri Lovely.
“Waa iyaga kuwa arrintayda soo dhigay baraha bulshada, waxaana u baqayaa xaaladdooda, maadaama ay wali ku sugan yihiin meel aan looga diir naxeyn.”
“Waxaad la xanuunsan tihiin waa dhibta aad nagu heysaan iyo mushaharka aan naga dhintaan,” ayay farriin ahaan ugu dirtay milkiilaha gurigii ay ka shaqeyn jirtay.
Markii Lovely lasoo samata-bixiyay, Jaariyad kale ayaa degdeg usoo codsatay gurmad, iyada oo ka sheeganeysa reerka ay la joogto oo ay ku sheegtay inaysan dulqaad yar xittaa u laheyn qaladaadka ay gasho.
Previous: La kulan – Qaariga dusha ka qeybsan Qur’anka oo Sanbab qura ka neefsada.
Next: Haweeneydii si la-yaab leh madaxeedu ugu xayirmay….